Somaliland: Kulankii Golaha Wasiiradda Maxaa Lagu Ansixiyay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Kal-fadhigii 45-aad ee golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa lagu meelmariyay dood dheer kadib xeerar kaabis iyo wax-ka-bedel lagu sameeyay.
Sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda Somaliland oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekadda Araweelo News Network, qoraalkaa, ayaa lagu yidhi, ” Kal-fadhigii 45-aad ee golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu gudoominayey madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa lagu ansixiyey xeerar, iyada oo sidoo kale lagu meelmariyey wax-ka-beddel lagu sameeyey qaar kamid ah xeerarkii hore u jirey.
Dood dheer iyo falanqeyn kaddib waxa ay golaha wasiirradu fadhigooda ku ansixiyeen:
Qabyo-qoraalka xeerka la dagaallanka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka.
Wax ka-beddelka iyo kaabista xeerka la dagaallanka mukhaadaraadka Xeer Lr. 21/2002 oo isagu hore u jiray, waxanay xeerarkani u gudbi doonaan golaha wakiilada Somaliland, iyagoo wax weyn ka tari doona Mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ka yimaadda Tahriibinta dadka iyo la dagaallanka Mukhaadaraadka dalka soo gala.